Ejypta : Fisamborana bilaogera taorian’ny vono olona tao Nag Hammadi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2018 4:18 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, عربي, Português, Swahili, Español, English
Bilaogera Ejypsiana roa-polo mahery no nosamborina raha teo am-pidinana ny lamasinina tao an-tanànan'i NagHammadi ao an-tampon'i Ejipta. Notarihin'ny Dr Mostafa Al Naggar, niala tao Cairo, Alexandria sy tanàna Ejipsiana hafa ireo bilagoera ireo mba hanome voninahitra ireo fianakaviana niharam-boina tamin'ny vono olona tao Naga Hammadi. Kopta (Kristianina any Ejypta) fito no maty voatifitra andro mialoha ny Noely tamin'ny 7 Janoary. Maro hafa no naratra rehefa nandao ny fiangonana taorian'ny vavaka Krismasy.
Tao amin'ny bilaoginy, Dr Mostafa Al Naggar nanoratra hoe :
Naato teo am-pidinana ny fiaran-dalamby ny fitsidihana tsy misy fikasana politika nataon'ireo bilaogera tany Nag Hamadi. Mitantara i Kareem El Beheiry:
Zeinobia naneho hevitra toy izao: